movie sanrakshan – Fursad Nepal
Tag Archives: movie sanrakshan
निखिल र सौगात मध्य कसले गर्ला मलिनाको संरक्षण ?
Featured, Nepali Movie News, फुर्सद फिल्मी Comments Off on निखिल र सौगात मध्य कसले गर्ला मलिनाको संरक्षण ?
गत शुक्रबार रिलिज अभिनेता निखिल उप्रेती अभिनित चलचित्र ‘रुद्र’ले खासै कमाल देखाउन सकेन । यो मात्र होइन ‘भैरव’ र ‘लुटेरा’पछि रिलिज भएका निखिलको चलचित्र दर्शकले खासै मन पराएनन् ।निखिल अभिनित अर्काे चलचित्र ‘संरक्षण’ आगामी शुक्रबार रिलिज हुँदैछ । चलचित्र दर्शकले मन पराउने धेरैको अपेक्षा छ । ‘संरक्षण’ मल्टिस्टार कलाकारले भरिएको चलचित्र हो । चलचित्रमा निखिलको अलवा सौगात मल्ल, मलिना जोशी, …
चितवनमा चलचित्र‘संरक्षण’को रेड कार्पेट प्रिमियर शो हुने
Featured, Nepali Movie News, फुर्सद फिल्मी Comments Off on चितवनमा चलचित्र‘संरक्षण’को रेड कार्पेट प्रिमियर शो हुने
राजनीतिक कथावस्तुलाई आधार मानेर बनाइएको चलचित्र “संरक्षण“ को रेड कार्पेट प्रिमियर शो चितवनमा हुने भएको छ । लक्की मिडिया हाउस चितवनको आयोजनामा साउन २५ गते ,बुधबार साँझ चलचित्र संरक्षणको भव्य रेड कार्पेट प्रिमियर शो हुने भएको हो । नायकद्धय सौगात मल्ल र निखिल उप्रेतीले अभिनय गरेको चलचित्र साउन २७ मा प्रर्दशनमा आउदैछ ।नेपाली सिनेमा क्षेत्रका हरेक गतिबिधिलाई प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ …